बीमा कम्पनीमा सेयर लगानी : १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कसको मुनाफा कति ! – Insurance Khabar
बीमा कम्पनीमा सेयर लगानी : १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कसको मुनाफा कति !
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०४:५४
इन्योरेन्स खवर/काठमाडौंः ‘पूँजी बजारको लगानी निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ, जोखिम उठाउन सक्नेले मात्रै लगानी गर्नुपर्छ ।’ यो भनाई केही समय अगाडि एउटा सार्वजानिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको हो । सेयर बजारमा देखिने उतारचढावले यो भनाईलाई पुष्टि पनि गर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखिएको छ । शेयर बजारमा बुझेर लगानी गरेको खण्डमा बढ्दा मात्रै नभई घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिन्छ । यद्यपी सेयरमा खरिद गर्दा कुन कम्पनीको किन्ने र केका आधारमा कम्पनी छनोट गर्ने धेरै लगानीकर्तामा हुने गर्दछ र यो स्वभाविक पनि हो ।
सेयर बजारमा अझैपनि कतिपय लगानीकर्ता हल्ला र सल्लाहका भरमा मात्रै लगानी गर्ने गर्नुहुन्छ । जसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । यस्तैमा आज हामीले लगानीकर्ताको निकै रोजाइमा पर्ने र विशेष गरी सर्ट टर्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीको पछिल्लो त्रैमासको खुद मुनाफा कस्तो रहेछ केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
वित्तीय विवरण पस्केका १३ निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो अवधिमा कम्पनीले ४६ करोड १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यसै त्रैमासको तुलनामा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको सो अवधिमा कम्पनीले २६ करोड १३ लाख ३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
१७३ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले ३ आर्थिक वर्षहरु २०६०/०६१, २०६१/०६२ र ०६२/०६३ को साधारण सभाबाट एकमुष्ठ रुपमा १ सय १४ प्रतिशत हाराहारीमा बोनस बितरण गरेको थियो । त्यस्तै कम्पनीले २०६८/६९ सम्मको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १२० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । भने असार मसान्तसम्म १ अर्ब पूँजी पुर्याउन शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै यो अवधिमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा कम ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । हकप्रद निष्कासनमा निकै विवादित बनेको यो कम्पनीको मुनाफा गतवर्षको यसैअवधिको भन्दा ४३ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढी हो ।
सर्वाधिक नाफा बढाउनेमा युनाईटेड इन्स्योरेन्स
निजि क्षेत्रको निर्जीवन बीमा कम्पनी युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले यो अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा बढाएको छ । गतवर्षको तेश्रो त्रैमासमा ४ करोड ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको यो कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ९ करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गतवर्षको तुलनामा १०३ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो ।
बैंकिङ तरलताले तरङ्गित हुँदै लगानीकर्ता, ‘तरलता अभाव हुनु भनेको बैंकको मुनाफा बढ्नु हो’